Apple ၏ TouchID ဖြုန်းတီးခြင်း | Gadget သတင်း
Juan Colilla | | Apple, ယေဘုယျ
Apple ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် iPhone 5s နှင့်အတူလူကြိုက်များပြီးဖြစ်သော fingerprint sensor «အဲဒါက“ ဒါပေမယ့်ဒီအပိုင်းမှာအက်ပဲလ်ဟာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုပြောင်းလဲမလာပါဘူး။ TouchID သည်အလွန်လုံခြုံသောစနစ်ဖြစ်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် iOS တွင်လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် developer များထံသို့ဖြန့်ချိခဲ့သည်မှာလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ Apple က TouchID ရဲ့စွမ်းအားကိုပြသခဲ့သည် ၎င်းကိုလွယ်ကူစွာရောက်ရှိနိုင်သော iPhone6နှင့်6Plus အား အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်၏နေရာများသို့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး, သီလအမြောက်အများရှိသည့်စနစ်တစ်ခုကိုညှစ်ထုတ်ရမည်၊ အက်ပဲလ်က၎င်းကိုလုပ်ရန်လိုနေသေးသည်။
TouchID သည်ထိုအရာများမှအပြည့်အ ၀ အသုံးချရန်အဘယ်လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ ငါစိတ်ကူးများ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်:
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ပျောက်ဆုံးပါကသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်၊ iCloud ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရှာရန်နှင့်အဆိုးဆုံးအနေဖြင့် iPhone ၏အကြောင်းအရာများကိုဖျက်ပစ်ရန်ဆုတောင်းရန်မိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရမည်။ မျက်နှာပြင်၏ Lock မျက်နှာပြင်နှင့်လေယာဉ်ပျံအသုံးစနစ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်အားရှာဖွေရန်ကံကောင်းပါစေ။ ထာဝရဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်စုဆောင်းရန်များစွာကုန်ကျသောငွေကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါ၊ Apple ကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုလုပ်နိူင်သည်။ TouchID ကိုညှစ်ခြင်း၊ ဤဖြစ်စဉ်တွင် iPhone ၏ခိုးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်သည်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါတို့ဖုန်းကိုခိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကအဲဒါကိုပျောက်သွားပြီလို့မှတ်ပြီးရင် Home ခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့လက်ဗွေတွေကိုမှတ်ပုံတင်မယ် (သူကခလုတ်အနည်းငယ်ထဲကတစ်ခု၊ သူခိုးကဟုတ်တယ် (ဟုတ်) ဟုတ်ဟုတ်လား) သုံးပြီးစာတိုက်ကနေသုံးဆီပို့လိုက် ရွေးချယ်မှုများ (သို့) Apple နှင့်၎င်းတို့သည်သင်၏လက်ဗွေပိုင်ရှင် (နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီတွင်နေထိုင်သူအားလုံး၏လက်ဗွေမှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ဟုယူဆရသောပိုင်ရှင်) ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်အားသို့မဟုတ်ရဲကိုဆက်သွယ်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ်ဤလက်ဗွေသည်သင့်အားစာဖြင့်သင့်ထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြ၍ ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာသူခိုးလက်ချောင်းရှိသည်ဟုပြောနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူခိုးကိုအကြောင်းကြားစာဖြင့်အာဏာပိုင်များထံတိုက်ရိုက်ပို့သည် (၎င်းကို iCloud မှပျောက်ဆုံးခြင်းဟုယခင်ကမှတ်သားထားပါက) ။ ဤရွေးချယ်စရာ ၃ ခုတွင်အာဏာပိုင်များသည်ကျူးလွန်သူသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောတရားခံ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအထောက်အထားများရှိခြင်းကြောင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဘယ်သူမှရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ဗွေတွေကနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထားခဲ့တာပါပဲ။ TouchID ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုမလားဆိုတာကျွန်ုပ်သေချာမသိဘူး၊ သင်၏လက်ဗွေ၏ပုံတစ်ပုံကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်နံပါတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် Apple သည်သုံးစွဲသူများကိုဤလက္ခဏာများစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
Apple သည်အိုင်ဖုန်းနှင့်အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်များပေါ်တွင်အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖွင့်နိုင်သည်။ သို့မှသာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်၎င်းတို့၏ဒေတာကိုသာရယူနိုင်ပြီးတူညီသောစက်ပစ္စည်းကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ကိရိယာကိုအသုံးပြုနေသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုမည်ကိုအသုံးပြုသူကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နည်းလမ်းကိုကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကို configure လုပ်ရန်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ (ကွဲပြားခြားနားသောကုဒ်များ၊ လုံခြုံရေးအတွက်ပိုမိုကြီးမားသော) အချက်အလက်များမပါဘဲ TouchID မှတစ်ဆင့် TouchID မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် သူသို့မဟုတ်သူမ၏အဘို့။ အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမိသားစုများနှင့်စုံတွဲများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း TouchID ကဲ့သို့သောစနစ်မျိုးတွင်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု (အက်ပဲလ်တွင် developer အနည်းငယ်ငှားရမ်းရန်ငွေမရှိသလောက်ဟုမထင်ပါ) နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုသာအသုံးပြုသည်။ ပြီးတော့ TouchID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှိလား။ ခိုင်မာသည့်အတွေးအခေါ်များဒီနေရာမှလာမရသိရန်မှတ်ချက်များတွင်သူတို့ကိုချန်ထားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » Apple » Apple ရဲ့ TouchID ဟာအလဟ။ ဖြစ်သွားတယ်
အက်ပလီကေးရှင်းသည်နှစ်ဆထိလွယ်ကူစွာရောက်ရှိရန်အတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်အိမ်တွင်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ယခုအခါကွဲပြားခြားနားသော BASIC လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် android ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုတာကိုနားလည်ရန်အလွန်ခက်ခဲသလား ??? ဥပမာအားဖြင့်ရိုးရိုးအသာပုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်လျှောက်လွှာတွင်မဆိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အလွယ်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ GENTLEMEN !!! Apple နှင့်၎င်း၏သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ပုံမရသေးပါ။ နောက်ဘက်မြားကိုဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်၌ထားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အကယ်၍ သင် iPhone ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အသုံးပြုလိုပါကအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သင်ဘာကစားနေသနည်း၊ ၎င်းသည်ဂိမ်းကိုအရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သောကြောင့်လျှောက်လွှာမှထုတ်ယူသောခလုတ်ကိုမတော်တဆထိမှန်ခြင်းမပြုလိုသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနည်းနည်းမနှေးတဲ့အတွက်ကစားရတာကြိုက်တဲ့ user ကိုထည့်မတွက်လို့ပဲ။ Apple တွင်၎င်းသည်ဗဟိုခလုတ်၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာခလုတ်နှစ်ခုကိုမမိတ်ဆက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် home ခလုတ်ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများပိုများလာသည်။ ၎င်းသည် android ထိတွေ့မှုနှင့်အသုံးပြုမှုမှသင်အားထုတ်ယူလိုက်သောထိတွေ့မှုကိုမတော်တဆမနှိပ်မိခြင်း၏အားသာချက်နှင့်အတူ BASIC လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်။ ။ သို့သော် Apple တွင်သူတို့သည်ဆိုက်များကိုရောက်ရှိရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုသည်၊ ၎င်းသည်အတွေးအခေါ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောင်းအားပေါင်းစုံကိုဖိအားနှစ်မျိုးဖြင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။ အမှန်တကယ်တွင်ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ရိုးရှင်းသောအမူအရာသို့သတ်မှတ်ရန်အားထုတ်မှုများစွာကုန်ကျမည်ဆိုလျှင် အိမ်မှာလက်ဝဲတစ်ဝက်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အက်ပဲလ်ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရာမှာအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဘာလို့နားမလည်တာလဲဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူး။